Main Zvigadzirwa Vagadziri & Vatengesi - China Main Zvigadzirwa Fekitori
U chimiro post
C chimiro post
Thrie danda rekuchengetedza
Iyo yekudzivirira inonyanya kutevedzera iyo AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 uye EN1317 standard. Izvo zvinhu zve izvo zvinonyanya iyo Q235B (S235Jr iyo goho simba rinopfuura 235Mpa) uye Q345B (S355Jr iro goho simba rinopfuura iro 345Mpa). Zvekukora kwenzvimbo dzekuchengetedza kunyanya kuburikidza ne 2.67mm kusvika 4.0mm. Kurapa kwepamusoro kunopiswa kwakakurirwa, kutevera iyo AASHTO M232 uye yakaenzana muyero senge AASHTO M111, EN1461 nezvimwewo nzira yekuchengetedza yakagadzirirwa mugwagwa mu ...
Iyo yekudzivirira inonyanya kutevedzera iyo AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 uye EN1317 standard. Izvo zvinhu zve izvo zvinonyanya iyo Q235B (S235Jr iyo goho simba rinopfuura 235Mpa) uye Q345B (S355Jr iro goho simba rinopfuura iro 345Mpa). Zvekukora kwenzvimbo dzekuchengetedza kunyanya kuburikidza ne 2.67mm kusvika 4.0mm. Kurapa kwepamusoro kunopiswa kwakakurirwa, kutevera iyo AASHTO M232 uye yakaenzana chiyero senge AASHTO M111, EN1461 nezvimwewo nzira yekuchengetedza yakagadzirirwa mugwagwa mu diff ...
Iyo posvo ndeye kunyanya kutevera iyo AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 uye EN1317 standard. Izvo zvinhu zve izvo zvinonyanya iyo Q235B (S235Jr iyo goho simba rinopfuura 235Mpa) uye Q345B (S355Jr iro goho simba rinopfuura iro 345Mpa). Nezve hukobvu hwevharira kunyanya kuburikidza ne4.0mm kusvika 7.0mm kana kutevera zvinodiwa nevatengi. Kurapa kwepamusoro kunopiswa kwakakurirwa, kutevera iyo AASHTO M232 uye yakaenzana chiyero senge AASHTO M111, EN1461 etc. Iyo posvo yakaiswa mukati ...
H chimiro post
Iyo posvo ndeye kunyanya kutevera iyo AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 uye EN1317 standard. Izvo zvinhu zve izvo zvinonyanya iyo Q235B (S235Jr iyo goho simba rinopfuura 235Mpa) uye Q345B (S355Jr iro goho simba rinopfuura iro 345Mpa). Nezve hukobvu hwevharira kunyanya kuburikidza ne4.0mm kusvika 7.0mm kana kutevera zvinodiwa nevatengi. Kurapa kwepamusoro kunopisa kwakanyoroveswa, kutevera iyo AASHTO M232 uye yakaenzana chiyero senge AASHTO M111, EN1461 etc. Iyo posvo yakaiswa int ...
Round chimiro post
Iwo magumo ekupedzisira anonyanya kutevedzera iyo AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 uye EN1317 standard. Izvo zvinhu zve izvo zvinonyanya iyo Q235B (S235Jr iyo goho simba rinopfuura 235Mpa) uye Q345B (S355Jr iro goho simba rinopfuura iro 345Mpa). Nezve hukobvu hwesitendi magumo kunyanya kuburikidza ne2.5mm kusvika 4.0mm kana kutevera vatengi vade. Kurapa kwepamusoro kunopiswa kwakakurirwa, kutevera iyo AASHTO M232 uye yakaenzana chiyero senge AASHTO M111, EN1461 nezvimwe.Iyo terminal e ...
Iwo mabhaudhi anotsanangurwa muANSI B1.13M yeGiredhi 6 g kushivirira. Bolt zvinhu zvinoenderana neASTM F568M yeChikoro 4.6. Chinyorwa chengura inodzivirira mabhaudhi inoenderana neASMM F 568M yeChikoro 8.83. bhaudhi. Kurapa kwepamusoro kunotevera iyo AASHTO M232. Iyo yakajairwa saizi yeiyo washer ndeye 76 * 44 * 4mm, uye isu tinokwanisa kuteedzera iyo mifananidzo kubva kumutengi. Kune iyo inoratidzira iyo vara inogara iri chena, tsvuku, uye yero, unogona kuzvisanganisa newe wega. Mabhaudhi uye nzungu zvinoitirwa kusungira muchengeti ...